Pathfinder Adventures 1.2.9 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.2.9 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ဂိမ္းမ်ား ဘုတ္ Pathfinder Adventures
Pathfinder Adventures ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Pathfinder Adventures ကို, Paizo Inc ကိုရဲ့ Pathfinder စွန့်စားမှုကတ်ဂိမ်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်လိုက်လျောညီထွေ, ကစားသမားများပူးပေါင်းမိကျောင်းနှင့်လူကြမ်းအဖြစ်တိုက်ဖျက်, သစ် Feat, ပစ္စည်းများဆည်းပူးဘယ်မှာကဒ်ဂိမ်းတစ်ခုလုံးဝသစ်ကိုဖောက်, သို့ကမ္ဘာ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Pathfinder Roleplaying ဂိမ်းဘာသာ, လက်နက်နှင့်မဟာမိတ်များ။
အခန်းက္ပ-ကစားသမားအလွန်အကျွမ်းတဝင်ဂိမ်းရဲ့ဇာတ်ကောင်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ စာလုံးများကိုသငျသညျစိန်ခေါ်မှုများကိုစူးစမ်းခြင်းနှင့်ကျော်လွှားအဖြစ်သင်ဟာသစ်ကိုပစ္စည်းများ, မဟာမိတ်များ, စာလုံးပေါင်းနှင့်လက်နက်များလေးလည်းအားဖြင့်သင့်ဇာတ်ကောင်တိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုတိုက်လေယာဉ်, wizard ကိုနှင့်လူဆိုးစာရင်းအဖြစ်အစွမ်းသတ္တိကိုသတ်မှတ်ကြောင်းနံပါတ်များ, Dexter, ထောက်လှမ်းရေး, အဖြစ်အတန်းရှိသည် ဖြစ်. , အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, သင်ပိုကောင်းသင့်ဇာတ်ကောင်များ၏သင့်ကိုယ်ပိုင်တစ်ဦးချင်းစီရူပါရုံကိုကိုက်ညီရန်သင့်ကုန်းပတ်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါဂိမ်းတစ်ကိုယ်တော်, ဒါမှမဟုတ် built-in pass-and ကစားလုပ်ဆောင်ချက်ကိုသုံးပြီးအခြားအစွန့်စားနှင့်အတူကစားနိုင်ပါတယ်။
Pathfinder Adventures ကိုသျောလညျးအခြို့ဂိမ်းပစ္စည်းများအမှန်တကယ်ငွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်, ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်ဤအင်္ဂါရပ်အသုံးပြုချင်ကြဘူးဆိုရငျ, သင့်ရဲ့ device ကိုရဲ့ setting တွင် In-app ကိုဝယ်ယူမှုကို disable ပေးပါ။
•အပြင်းထန်စွာ-လွတ်လပ်သော Sandpoint အပါအဝင် Runelords ကမ်ပိန်း၏ထနှင့် Thistletop ၏မှင်စာကာပိုးကျွန်း၏မြို့ရွာ, မြို့ကြီးများ, ထောင်ထဲကများနှင့်ရှုခင်းများ Explore ။
Pathfinder ရဲ့အထင်ကရဇာတ်ကောင် featuring •ရှိသူများအတွက်ဖြတ်မြင်ကွင်းများ။
•တစ်ဦးအပြန်အလှန်သင်ခန်းစာဂိမ်းရောနှောအဆိုပါ Pathfinder ဝဠာသစ်ကိုစွန့်စားခြင်းနှင့်စစ်ပြန်များအတွက်သင်ယူဖို့လွယ်ကူသည်သေချာ။
•အဘယ်သူမျှမရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဒ်ဂိမ်း Set-up လိုအပ်သည်။ Pathfinder Adventures ကိုဖြောင့်အရေးယူသို့ကစားသမားရရှိသွားတဲ့။
•အကွိမျမြားစှာစွန့်စားမှု profile များကိုကစားသမားတိုင်းဇာတ်ကောင်သုံးပြီးမဲဆွယ်မှုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်အောင်။
•လူပျိုကစားသမားများနှင့်ဖြတ်သန်း-and ကစား multiplayer ဂိမ်း mode ကို။
Asmodee ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းပိုမိုသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေ, http://www.asmodee-digital.com သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး
ပြဿနာတစ်ခုရှိနေပါသလား? အထောက်အပံ့ရှာဖွေနေပါသလား ကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်: https://asmodee.helpshift.com/a/pathfinder/
သငျသညျက Facebook, Twitter, Instagram နှင့် You Tube ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုကျနာနိုငျပါသညျ!
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/asmodeedigital/
Instagram ကို: https://www.instagram.com/asmodeedigital/
Pathfinder Adventures အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Pathfinder Adventures အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Pathfinder Adventures အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Pathfinder Adventures အား အခ်က္ျပပါ
apps စတိုး 2.72M 3590.43M
Pathfinder Adventures ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Pathfinder Adventures အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Obsidian Entertainment
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://pathfinder.obsidian.net/privacy-policy
လက်မှတ် SHA1: 66:BE:00:0F:40:18:FC:03:26:D3:B0:5D:22:8F:49:6F:7D:6A:E5:46
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Obsidian
အဖွဲ့အစည်း (O): Obsidian
နယ်မြေ (L): Irvine
Pathfinder Adventures APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ